Cristiano Ronaldo oo sanadkii 3-aad oo xiriir ah ku guuleystay abaal marinta Salon d’Or – Gool FM
Cristiano Ronaldo oo sanadkii 3-aad oo xiriir ah ku guuleystay abaal marinta Salon d’Or
Byare January 12, 2017
(Europe) 12 Jan 2017. Cristiano Ronaldo oo dhawaan ku guuleystay abaal marinnada Ballon d’Or iyo FIFA Best Player ayaa misane markan ku guuleystay abaal marinta Salon d’Or ee TIMO jaristii ugu shidnayd ee sanadkii tagay.
Inkastuu Lionel Messi iska soo dhisay qaab jarniinka TINTA isagoo labo far soo galiyay hoos isla markaana tinta soo midabeystay ayuu misane ku garaaci waayay Ronaldo abaal maritna Salon d’Or ay bixiso Goal.com.
Xiddiga reer Portugal ayaa ku guuleystay sanadkii saddexaad oo xiriir ah kaddib markii uu helay cod dhan 21% 19,111-cod ay soo dhiibteen aqristayaasha Goal.com.
Lionel Messi ayaa kaalinta 2-aad soo galay kaddib markii uu helay codad dhan 16%, waana markii ugu fiicnayd waayo marna horey uma soo galin xitaa 20-ka sare ee abaal marinta timo jarista ugu shidan.
Waxaa 3-aad soo xirtay laacibka ugu qaalisan kubbada cagta adduunka Paul Pogba kaddib markii uu tinta xiirtay kuna soo qortay ‘Pogboom’
Olivier Giroud ee weerarka kaga ciyaara Arsenal ayaa afaraad ka soo galay abaal marinta Salon d’Or halka xiddiga Inter Milan Ivan Perisic uu 5-aad soo xirtay kaddib sidii yaabka lahayd uu tinta u soo xiirtay koobkii Euro 2016 kolkaa uu matalayay xulkiisa Croatia.
Diraasad cusub oo lagu soo saaray 20-ka koox ay shaxdooda ugu qaalisan tahay Yurub….(Man United oo makaan fiican ku jirta)